राजपा र फोरमका लागि दुई नम्बर प्रदेश तामिलनाडु र एक नम्बर प्रदेश काश्मिर हुनसक्छ | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » राजपा र फोरमका लागि दुई नम्बर प्रदेश तामिलनाडु र एक नम्बर प्रदेश काश्मिर हुनसक्छ
राजपा र फोरमका लागि दुई नम्बर प्रदेश तामिलनाडु र एक नम्बर प्रदेश काश्मिर हुनसक्छ
SAHARA TIMES Wednesday, August 1, 20180No comments
विद्यार्थीकालदेखि नै मधेश राजनीतिकमा सक्रिय सन्तोष मेहता युवा नेतामा क्रियाशिल र सक्रिय नेताको रुपमा चिनिन्छन् । पोल्टिक्सका लागि आफ्ना पूरै समय खर्चिरहनु भएका मेहता सुनसरी जिल्लाका चर्चित नेता हुनुहुन्छ । मधेश आन्दोलन होस् वा कुनै विकास सम्बन्धी आन्दोलन होस् सबैमा उहाँको अगुवाई हुन्थ्यो । मधेशी जनताका लागि सुनसरीमा आमरण अनसन समेत गर्नुभएका मेहता अहिले केन्द्रभन्दा आफ्नो कार्यक्षेत्र सुनसरीमा बढी ध्यान दिनुभएको छ । त्यसको कारण हो, त्यहाँका मधेशी जनता फ्रस्टेड हुनु । मधेशी जनता नेतृत्वविहिन भएपछि, राजपा नेपालका नेताहरु दुई नम्बरमा केन्द्रित भएपछि बाध्य भएर उहाँको जनताको बीचमा जानु भएको हो । पहिला पनि समय समयमा जानु हुन्थ्यो तर अहिले झन टाइम दिन थाल्नुभएको हो । प्रदेश १ को मधेश राजनीतिक र प्रदेश २ को भूमिकाका बारेमा सुनसरीमा रहनु भएका राजपा नेपालका प्रवक्ता सन्तोष मेहतासँग सहारा टाइम्सले गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः
राजपा नेपाल र फोरम नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधि प्रदेश २ मा केन्द्रीत भएपछि एक नम्बर प्रदेशको मधेशी राजनीतिक कसरी आगाडी बढेको छ ?
–मधेशको हरेक आन्दोलनमा एक नम्बर प्रदेशको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । आन्दोलनमा सो प्रदेशको सहभागी उच्च हुन्थ्यो । तर पछिल्लो समय राजपा नेपालले स्थानीय तहको चुनाव वहिष्कार गर्नु र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र एक नम्बर प्रदेश छाडेर दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव लड्नुले पनि एक नम्बर प्रदेश कमजोर भएको छ । अहिले त्यहाँका जनता निकै निराश भएका छन् । अहिले मधेशले पाउन सेवा सुविधा र अधिकार दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र केन्द्रीत भएको हुनाले एक नम्बरका मधेशी जनता निकै निराश भएका छन् । प्रदेश २ का लागि जन्मसिद्धका नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने भनि त्यहाँका सरकारले आठ जिल्लालाई सर्कुलर पठाएको थियो । यद्यपी सिडियोले त्यसलाई मानेको छैन । सरकारले त्यहाँका सरकारले मधेशीका लागि गर्ने काम प्रदेश एकका जनताले नपाउने भएपछि त्यहाँका जनता निराश र फ्रस्टेड भएका छन् ।
प्रदेश १ का सरकारले त्यहाँका मधेशीका लागि केही गरिरहेका छैन त ?
–जति पनि काम भइरहेका छन्, सबै पहाडीका लागि मात्र भइरहेको छ । आदिवासी जनजातिका लागि काम गरिरहेका छन् त्यो पहाडीका लागि मात्र, दलितका लागि काम गरिरहेका छन् त्यो पनि पहाडीका लागि मात्र अर्थात त्यहाँ हरेक गतिविधि पहाडी समुदायका लागि मात्र भइरहेको छ । मधेशको बारेमा त्यहाँ कसैले सोच्दा पनि सोच्दैन । मानौ यो देशमा मधेशका लागि कुनै सरकार नै छैन । पहिला केन्द्रीय सरकार पनि मधेशीका लागि थिएन अहिले प्रदेश सरकार पनि त्यहाँका मधेशीका लागि बनेको छैन जस्तो लाग्छ । मैले त्यहाँका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए तर उहाँ पनि मधेशीका लागि केही गर्ने सोच पाइएन ।
त्यहाँका मधेशी जनताले के भनिरहेका छन् त ?
–त्यहाँका मधेशी जनताले आन्दोलन गर्दा जुन सपना देखेका थिए त्यो पुरा नहुने देखेपछि निकै दुखी छ । आफ्नै भाषा, आफै सरकार, आफ्नै विद्यालय, आफ्नै शासनको हुने सपना त्यहाँका जनता देखेका थिए । दुई नम्बर प्रदेशका जनताले जुन अधिकार उपयोग गर्न पाउँछन् त्यो यदि एक नम्बरका मधेसी जनताले पाएनन् भने त्यहाँ ठूलो विद्रोह हुनसक्छ । त्यतिबेला त्यहाँको अवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुनसक्छ । एक नम्बर प्रदेशका मधेशीको पहिचान र प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा बोल्ने र सोच्ने कोही पनि छैन । एक हिसाबले त्यहाँका मधेशीहरु नेतृत्व विहिन अर्थात अनाथ भएका छन् अहिले ।
त्यसो भए एक नम्बर प्रदेशका मधेशी जनता नेतृत्व विहिन बनेका छन् त्यसो भए ?
–वास्तवमा अहिले प्रदेश १ का मधेशी पोल्टिक्स नेतृत्व विहिन भएको छ । केही नेताहरु छन् त्यसलाई पनि नेतृत्व र अधिकार दिएको छैन । राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलमा रहेका छजना दुई नम्बर प्रदेशका रहेका छन् । राजनीतिक समितिमा पनि पाँच नम्बर, काठमाडौ र सात नम्बर प्रदेशका नेताहरु सदस्यका रुपमा छन् तर एक नम्बर प्रदेशका कोही एकजना पनि राजनीतिक समितिमा छैन । फोरम नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै छ । उपेन्द्र यादव स्वयं एक नम्बरका हुन् । तर उहाँ पनि सो प्रदेशलाई छाडेर दुई नम्बर प्रदेशबाट चुनाव लड्नुभयो । उहाँको पार्टीमा पनि एक नम्बर प्रदेशबाट कोही पनि पदाधिकारी छैन । अशोक राई हुनुहुन्छ तर उहाँ पहाडी हुनुभयो । एक समय थियो फोरम नेपालमा एक नम्बरबाट अत्याधिक पदाधिकारी हुन्थे तर अहिले शुन्य छन् । अर्थात एक नम्बर प्रदेश नेतृत्व विहिन भएको छ ।
त्यहाँका मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारुहरु के आश र भरोसा गरेर बसेका छन् त ?
–पहिलो कुरा त एक नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगर राखेको कारण त्यहाँका मधेशीहरु त्यसमा अलिकति सन्तोष गरेका छन् । विराटनगर अस्थायी राजधानी हो । त्यहाँबाट अरु ठाउँ सार्ने कुरा भइरहेको छ । यदि त्यस्तो भयो भने मधेशीको धेर्यको बाँध टुट्ने छ । र एउटा ठूलो विद्रोह हुनसक्छ । विराटनगर भएपछि मधेशी जनताले अपनत्व फिल गरिरहेका छन् । यदि विराटनगरबाट राजधानी सार्यो भने झापा, मोरगं र सुनसरीका जनता एक नम्बरमा कुनै पनि हालतमा बस्दैन । विराटनगर भएपछि त्यहाँ आन्दोलन गरेर भएपनि वा दवाव दिएर भएपनि केही नकेही गर्न सकिन्छ भनि आश मधेशी जनतामा छ । त्यहाँका मधेशीले कुनै नकुनै रुपमा अधिकार लिन सकिन्छ भनि आशमा छन् ।
यो कुरा त राजपा र फोरम नेपालका नेतृत्व पक्षलाई त थाह छ नि तर किन ध्यान दिँदैन त ?
–यो निकै गम्भीर कुरा हो । मेरो प्रश्न पनि यही हो कि राजपा र फोरमले प्रदेश १ प्रति किन ध्यान दिँदैन तर उहाँहरुको स्पष्ट जवाफ आइरहेको छैन । जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँहरुले थाह पाइसक्नु भयो कि एक नम्बर प्रदेशमा अब केही गर्न सकिदैन । त्यहाँ राजपा र फोरम नेपालको केही चल्दैन भन्ने कुरा उहाँहरुलाई लागेको हुनुपर्छ त्यही भएर त्यहाँ ध्यान दिँदैन । यहाँका मधेशी जनताले पनि थाह पाइसके कि राजपा र फोरमले पनि केही गर्न सकिदैन । त्यस्तै उपेन्द्र यादवलाई पनि लाग्यो कि यहाँबाट म चुनाव हार्छु भनि दुई नम्बर प्रदेशमा जानुभयो । राजपा नेपालले पनि एक नम्बरमा कमजोर छु भनेर त्यहाँको चुनावमा भाग लिएन र पछि दुई नम्बर प्रदेशमा भाग लियो । यी सब कारणले लाग्छ कि प्रदेश १ प्रति ती दलहरु संवेदनशिल छैन । मलाई लाग्छ कि भारतको काश्मिर जस्तै राजपा र फोरमका लागि एक नम्बर प्रदेश हुनसक्छ । जसरी विजेपीका लागि काश्मिर राम्रो ठाउँ थिएन पछि राम्रो भयो । राजपा नेपालका लागि त्यस्तै हुनसक्छ एक नम्बर प्रदेश । राजपा र फोरमका लागि दुई नम्बर प्रदेश तामिलनाडु जस्तो हुन्छ भने एक नम्बर प्रदेश काश्मिर जस्तै ।
प्रदेश १ मा जुन आन्दोलनको सम्भावना देखाउनु भयो त्यो राज्यको साथै दुई नम्बर प्रदेशका नेताहरुको विरुद्धमा पनि हुनसक्छ कि सक्दैन ?
–हुनसक्छ, यसमा धेरै नै सम्भावना हुनसक्छ । एक नम्बर प्रदेशका जनताका साथमा राजपा नेपाल र फोरमले जुन व्यवहार गरिरहेको छ । जुन धोका दिएको छ त्यसको बदला त अवश्य नै लिनेछ । राजपा र फोरम नेतृत्वको विरुद्धमा आन्दोलन हुनसक्छ । अहिले पनि केही विग्रेको छैन । प्रदेश १ नम्बर प्रदेशका लागि अहिले पनि केही गर्न सकिन्छ । त्यहाँको मधेशी जनताका लागि बोलि दियो भने त्यहाँका जनताका लागि सजिलो हुन्छ । बेलाबेलामा गएर कार्यक्रम गरिदिने । संगठन बनाई दिने जस्तो काम गर्यो भने जनता पुनः आकर्षित हुन्छ तर अहिले पुरै छाडेको छ । जसले गर्दा जनतामा निराशाका साथै फ्रस्टेशन आएको छ । र, त्यो फ्रस्टेशनका कारण काँग्रेस र नेकपाप्रति झुकाव पनि बढी रहेको मैले पाएको छु । त्यसलाई रोक्नका लागि त्यहाँ संगठनका गतिविधिहरु बढाउनुपर्ने हुन्छ ।